Pochettino ayaa doonaya Pogba, wuxuu ku biirayaa Chelsea
Laakiin sidaan halkan ku baranay, waxaan idinla wadaagaynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa iyo xanta suuqa dhexdiisa wargeysyada waaweyn ee yurub maalinta Axada.
Inter Milan ayaa doonaysa in ay heshiis amaah ah kula soo saxiixato xiddiga khadka dhexe ee kooxda Man United ee Jesse Lingard oo 28 jir ah laakiin waxa ay marka hore badali doontaa Christian Eriksen oo 28 jir ah (Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa doonaya tababaraha cusub ee Paris St-Germain Mauricio Pochettino madaama uu qorsheynayo inuu dib u dhiso kooxdiisa. (Daily Star)
Chelsea ayaa diyaar u ah inay la tartanto daafaca reer France BR Leipzig iyo xiddiga reer France Dayot Upamecano, oo 22 jir ah (Daily Mail)
RB Leipzig ayaa xaqiijisay inay iibin doonaan Upamecano, iyadoo Manchester United ay ka mid tahay kooxaha kale ee xiiseynaya. (RAG)
Mesut Ozil ayaa u soo bandhigay Arsenal heshiis u fududeynaya inuu baxo ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka ilaa 2023, markaasoo uu u dhaqaaqayo kooxda reer Turkey ee Fenerbahce bisha Janaayo. ,000 350,000 Oz Oz Ozil ayaa ku booriyay Gunners inay bixiyaan lacag gaareysa 68,000 isbuucii muddo hal sano ah iyo labo sano iyo dheeraad. (Cadceed)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee West Ham Declan Rice ayaa doonaya inuu sii joogo London islamarkaana uu ka tago Manchester United. Hadalka 21 jirkaan ayaa ka farxinaya Chelsea. (Mirror)
West Ham ayaa iibsaneysa dalab 30 milyan oo ginni ah oo ay ka dooneyso Isegla Sarr (22 jir) oo ka kala yimid dalalka Senegal iyo Watford. (Cadceed)
Tababaraha West Ham David Moyes ayaa doonaya inuu heshiis amaah ah kula soo wareego weeraryahanka Real Madrid Mariano Diaz oo 27 jir ah. (Daily mail)
Xiddiga Arsenal Lucas Torreira ayaa ku sii jeeda Fiorentina ka dib markii 24 jirkaan uu amaah ku seegay Atletico Madrid intii lagu jiray xagaagii. (Mundo Deportivo)
Everton ayaa wadahadalo kula jirta Bournemouth oo ku saabsan u dhaqaaqista weeraryahanka reer Norway Joshua King, oo 28 jir ah. Toffees ayaa u soo bandhigi doona Bournemouth 18 jir Jarrad Branthwaite ama 23 jirka daafaca midig Jonjoe Kenny. (Cadceed)
Manchester United ayaa go’aansatay inay ka tagto 19 jirka qadka dhexe Moises Caicedo, laakiin ninka Independiente del Valle ayaa weli diirada u saaran kooxaha Premier League. (Sky Sports)
Weeraryahanka reer France Moussa Dembele oo 24 jir ah ayaa iska diiday fursad uu ugu biiri lahaa West Ham bisha Janaayo. (Xogta Kubadda Cagta)
Moussa Dembele ayaa la rumeysan yahay inuu ku dhow yahay inuu ku biiro Atletico Madrid. (Magac)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City iyo xulka Brazil Fernandinho, oo qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan, ayaa ka fiirsanaya dalabyada uga imaanaya kooxaha ka dhisan dalkiisa iyo Yurub, sida uu sheegay wakiilka 35 jirkaan. (Hadaf)